Kursiga oi Bari ku tartamaayo Yaasiin Faray oo Dacwo culus laga gudbiyey | Dayniile.com
Home Warkii Kursiga oi Bari ku tartamaayo Yaasiin Faray oo Dacwo culus laga gudbiyey
Kursiga oi Bari ku tartamaayo Yaasiin Faray oo Dacwo culus laga gudbiyey
Waxaa sii xoogeysanaya cabasho ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degaan doorashada kuraastooda ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo sheegaya in ergo aan sax ahayn la xaraynayo kuwii reerkana laga tegay.
Guddiga doorashada ayaa caawa shaaciyey in labo kursi oo uu ku jiro kursigan beri loo tartamayo, taasoo xaalada ka dhigysa mid ka sii darta
Nabadoon Cali Xasan Cali (Cali Jeesto) oo sheegay inuu yahay odaygii rasmiga ahaa ee kursiga uu tirsigu yahay HOP#67 ayaa sheegay inuusan waxba ka ogeyn ergada joogta Magaalada Dhuusamareeb, isagana laga hor istaagay inuu magaaladaas tago.
Cali Jeesto ayaa cabasho arrintaas la xiriirta u gudbiyey guddiga doorashooyinka Qaranka, kaasoo uu sheegayo in kursiga beeshiisa la boobayo.
Dood ayaa ka dhalatay tallaabo ay guddiga doorashada ay warqadaha aqoonsiga diiwaangelinta ku guddoonsiiyeen taliyaha Hay’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka, Yaasiin Cabdullaahi Max’uud (Yaasiin Farey), arrintaasoo lagu tilmaamay mid hareer marsan habraacii doorashada.
Kursigan waxaa muranka ugu culusi dhex yaallaa laba masuul oo midna hadda ka tirsan yahay Haayadda NISA midna hore uga tirsanaa haayaaddaas. Kuwaasoo kala ah Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad sugida (NISA) Jan. Abdirahman Tuuryare iyo ku simaha taliyaha NISA ee hadda, Yaasin Cabdullaahi Fareey oo lagu xamanayo iney gadaal ka riixeyso Villa Somalia.
Kursigan oo uu hore ugu fadhiyey Caddow Cali Gees oo isagu hadda iskaga haray tartankan ayaa waxaa jira musharrixiin kale oo hunguraynaya.
HOOS KA DAAWO SAWIRADA IYO QORAALKA DACWADA
Previous articleXoogaga Alshabaab oi gudaha u Galay Dalka Etoobiya
Next articleGuddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal oo ka hadlay hannaanka ay doorashada u socoto
Dagaal dhexmaray Ciidamada Puntland & Al-Shabaab
Dagaalka ayaa xalay xilli dambe waxaa uu Ciidamada Puntland iyo Xubno kantirsan Ururka Al-Shabaab uu ku dhexmaray buuraha dhanka waqooyi kaga beegan tuulada Af-...
Soomaalidii ugu badnayd oo Doorashooyinka Minneapolis u tartamaya